खुकुरी रमको कमाल – निरज's BLOG
खुकुरी रमको कमाल
NTM	on January 14, 2017
आँखा खुल्यो ।
झ्याल बाट बाहिर हेरे – अझै अध्यारै । हैन यो बिहान हुन पनि कति time लाग्दो रहेछ – मनमनै सोचे ।
टाउको दुख्ला जस्तो, कस्तो uneasy feel भएको । डकार मा पनि ग्यास्ट्रिकको स्वाद – नेपालीहरुको common बेथा । म पनि तेस बाट टाडा हुन सकिन । अचानक नमिठो गन्ध नाकैमा आएर ठोक्कियो ।
side मा रमेश दाजु सुति रहनु भएको थियो । कतै दाजु ले पो बिहान बिहानै bomb प्रहार गर्नु भो कि ? संका लाग्यो । बातावरण झन् प्रधुसन हुदै गयो ।
पहिला आफुलाई सुघेर हेरे -ठिकै छ ।
रमेश दाजु लाई पनि सुघने प्रयास गरे – ठिकै छ ।
के हो के हो । थाहा पाउनै सकिन ।
mobile झिक्नलाई सिरानी उठाए ।
बल्ल पो होस् आयो त ……।
(छ घण्टा अगाडी)
बोका होटेलको साउजीसंग खासखुस गर्दै सेटिंग मिलाउदै थियो । नजिकै म थिए । मलाई देखेर मुसुक्क हास्यो अनि मैले पनि थाहै नपाएको जस्तो गरी मुसुक्क हासिदिए।
बोका भन्नाले मैले जनावर को कुरा गरेको हैन ni ।
मेरो class मा आउनु भयो भने बोका, गाई, गोरु, डन, पार्टी, chopstick, गॊले, मंगोल, हाकु, कामरेड सबै पाउनु हुन्छ । कसैको न्वारन गर्नलाई ज्योतिस बा को कमी छैन ।
राति झमक्कै भइसकेको थियो । खाना खाएर केटी साथीहरु एउटा अलग्गै रूम गए । केहि केटा साथीहरु पनि लामो यात्राको थकानले गर्दा चाडै सुत्न गए । बचेका हामीहरु भने रमाइलो गर्न तिर लागियो ।
कलेजबाट educational tourका लागि – kaligandaki hydropower स्यांन्जा पुगेका थियौ । साथमा दुई जना सर हुनुहुन्थ्यो ।
अर्को group भने madhya marshyandi गएका थिए । बोका को मिल्ने साथी सबै तेतै ।
कसरी यो group आयो, अलि अचम्ममा परे।
बच्चामा गोलो आकारमा रुमाल लुकाई खेलेको जस्तै गरी सबै केटाहरु बसे ।
गीतार कसको, थाहा भएन – साएद प्रज्वोलको ।
तेइ भएर होला next नेपाली ताराको छनक देखाएको ।
एउटा दामी गीत जाऒस प्रज्वोल – chopstickले भनि हाल्यो ।
तेस पछी के नै चाहिँ यो र …. दरो रयाप version सुरु भो।
गीत त दामी थियो तर कुन चाहिँ थियो थाहै भएन – पहिलोपल्ट सुनेको ।
दालमोठ चिउरा संगै गीतको तालमा ताल मिलाएर सबै जना गाउनको धुनमा ।
बोका भने ढोकाको चुकुल लगाउन गयो ।
हात खाटमुनी लग्यो अनि भटाभट निकाल्न थाल्यो – खुकुरी रम ।
यो हो नी पारा – उज्ज्वोल खुसि ले करायो ।
बोका लास्ट बाठो । अझ गिलास पनि कति खेर manage गरेछ ।
सबै को अगाडी गिलास अनि खुकुरी रम ।
खुकुरी रम पहिलो पल्ट पिउदै थिए ।
बियर सम्म त सकिन्थ्यो तर हार्ड ड्रिंक्स अलि गारो । जाडोमा तातो भन्दै बोका प्याक तयार गर्न थाल्यो ।
रमाइलो गर्न आएका हौ नि भन्दै सबैलाई मक्ख पार्यो । म पनि हो मा हो भन्दै प्याक तान्नतिर लागे ।
सबैको प्याक तयार भयो …..
मनोज height मा सब भन्दा सानो तर बोली मा फास्ट । एक प्याक लगाए पछि त , गीतार समात्त्यो अनि सुरु …….. गोर्खाली को छोरो म गोर्खे मेरो नाम…..
school का रमाइला रमाइला घटना सुनाउन थाल्यो ।
केटाहरुले गीतार बजाएको देख्दा मलाई पनि मनै देखि गीतार बजाउन रहर लाग्थ्यो । गीतार सिकेर live concert दिने ठुलो धोको छ । खै यो पारा ले त पुरा नहोला जस्तो छ।
माहोल बिस्तारै तातिदै थियो । गिलास रित्तिदै गयो । बोतल सुरु मा त दूई तीन ओटा मात्र लाग्थ्यो कति खेर दर्जन पुगेछ थाहै भएन ।
मेरो पीउने बानि त थिएन तर रमाइलो भन्दै कति प्याक हाने हिसाब नै भएन । हिसाब थाहा नभए पनि पिसाब आएको चाही थाहा हुदो रहेछ । सुरु को प्याक जति निल्न गारो भो पछि पछि त झन प्यारो भो ।
यो सम्झिदा अहिलेको गीत पो याद आयो –
”पिउदिन भन्दा भन्दै पिलायो बोकाले, म छु भनि भरोसा दिलायो बोकाले ….. ”
होटेलको साउजी छिमेकिहरुलाइ डिस्टर्ब भो भनेर अली सानो सोरमा गाउन अनुरोध गर्दै थिए । बोका भने अझै बोत्तलको dealing गर्दै साउजिलाई फ़काउदै थियो । कला चाही मान्नै पर्छ बोकाको । तर रमको सुरमा भएका केटाहरु भनेको के सुन्थे । पछि हामीसँगै जानु भएका सर आउनु भएपछि केटाहरुको सातो उड़यो ।
कति खेर आ आफ्नो गिलास र बोतल लुकाउन भ्याइहाले । केटाहरुलाई मान्नै पर्छ । बिचरा प्रज्वल पो फसाद मा । उसको अगाडि मात्र गिलास अनि तेस्मा रम । एक चोटी सवैलाइ हेर्नु भो अनि जानु भो । आगडि गिलास भटाभट निक्लिन सुरु भो ।
माते पछि होस् हुदैन भन्थे । आफुलाई रमले छोएको थाहा भो । तेसैले बाथरूम गए – फ्रेश हुन ।
हल्का खुट्टा दाया बाया भएको महसुस भयो । मनमनै हासे – मलाई लागेछ,अब भयो ।
एकछिन पछि केटाहरु आ आफ्नो तालमा । लास्टको एक प्याक घ्याम्पे हाने पछि बल्ल सुत्ने तयारी भयो ।
(एक घण्टा पछि)
अचानक टाउको घुमाउन थाल्यो । रिगटा लाग्ला जस्तो । दुई ओटा हातले टाउको समाए , भएन । एकछिन उभेर बसे भएन । पानी पीए , भएन ।
सबै जना मस्त निंद्रामा । म मात्र के गरु के गरु । रमले नमज्जाले 360 डिग्री कोण नै देखाई दियो ।
एकछिन पछि त vomit आउला जस्तो भो । बाथरूम गए र vomit गरे । अलि सान्त होला जस्तो भो । केहि हल्का महसूस भयो । तेस्पछि सुते ।
(आधा घण्टा पछि)
फेरी 360 डिग्री सुरु । यो पाली त बाथरूम जान सकिन । बराण्डा बाटै दिए । आन्ध्रा भुडि बाहिर आउला जस्तो । लास्ट गारो भो । side मा मेरो अर्को मित्र लाइ कति खेर मेरै बेथा लागेको रहेछ, म भन्दा अगाडि नै । येस्तै हो यार,सालालाई cocktail नगर भनेको मान्दै मानेन – साथी भन्दै थियो ।
कमसे कम पार्टनर त भेटे । मलाई मात्र त भएको रहेन छ, अलि खुसि लाग्यो ।
मन मनै सोचे अब देखि यो रम कहिले पिउदिन । sorry मम् – मनै बाट भने । केहि हल्का भो । चिसो हावाले केहि फ्रेश महसूस गरायो । अनि फेरी सुत्न गए ।
निंद्रा झप्पकै लाग्ला जस्तो के भएको थियो vomit आई त हाल्यो । सिरानी उठाए अनि तेहि दिए अनि सिरानिले छोपे । जुरुक्क उठे, बाथरूम गए, मुख सफा गरे अनि आएर अर्को साथीको नजिक गएर सुते।
यसपाली मिठो निंद्रा लाग्यो ।
टाउको दुख्ला जस्तो, कस्तो uneasy feel भएको । डकार मा पनि ग्यास्ट्रिकको स्वाद – नेपालीहरुको common बेथा । म पनि तेस बाट टाडा हुन सकिन । अचानक नमिठो गन्ध नाकै मा आएर ठोक्कियो ।
side मा रमेश दाजु सुति रहनु भएको थियो । कतै दाजु ले पो बिहान बिहानै bomb प्रहार गर्नु भो कि ? संका लाग्यो । बातावरण झन् प्रधुसन हुदै गयो । तर तेसको असर यति बेला सम्म त जानु पर्ने हो ।
यो त हिजो राती सिरानी मुनि भएको undigested फूड बाट पो आएको रहेछ ।
कसैले थाहा नपाउने तरिकाले फटाफट उठे , फ्रेश भए अनि तल गए ।
होटल गएर lemon चिया पीए। हिजोको hang धेरै कम गरायो । होटलको अगाडि त भातैभात छरेको रहेछ । साउजी काम गर्ने केटाहरुलाइ कराउदै थीए । पछि पो थाहा भो त्यो त हिजो राति म र साथी को काम पो रहेछ । दरो काम पो गरीए छ । बिहान पो थाहा भो । केहि नभनि सुरुसुरु बसमा गएर बसे ।
केटाहरु कुरा गर्दै थीए । होटल साहुले extra चार्ज लिएको । रूममा सिरानी, तन्ना, ड़स्ना सब फोहोर गरेको हुनाले ।
मन मनै मुसु मुसु हॉसे अनि सोचे मैले तेस्तो पो गरेछु ?????
एउटा पाठ सिके ।
”घाटी हेरेर हाड निल्नु ।आफुले जति पचाउन सकिन्छ त्यति नै लिनु ।”
Tag: amomenttoremember, blogging, educationaltour, kaligandaki Nepal
Previous: Previous post: Dangal****
Next: Next post: A Letter to Messi
Published by NTM
Keep learning, Keep sharing	View all posts by NTM
﻿tratamento para cabelos cacheados	 January 22, 2017 at 9:58 AM
Há ainda ɑ opção da aquisição de Kits, ߋs quais foram elaborados cuidadosamente,
tornando օs shampoos ρara queda de cabelo masculino օu
feminino ainda mais acessíveis. http://arthundweise.de/index.php?title=%C3%82%E2%80%A0%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2_Calv%C3%83%C2%ADcie_Feminina_Tem_Tratamento_100_Natural
NTM	 May 3, 2017 at 10:07 AM
I can’t understand what you mean to say. Would you please write in english?
Rachelle Lomax on Success Mantras by Nepal…
Marshall Cabbell on Motivational videos of young N…
Archives Select Month December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 September 2016
Categories Select Category Experiences Journey to Australia Knowledge Moments Photography Travel Diary
Every body hasastory to tell, moments to remember and experiences to share. I do have and this is the page why I created.